Wanaaga, Weyn, iyo Naxdinta leh Sirdoonka Artifishalka | Martech Zone
Wanaaga, Weyn, iyo Cabsida leh Sirdoonka Artifishalka
Khamiis, May 11, 2017 Khamiis, May 11, 2017 Douglas Karr
Markii si sharaf leh layga soo saaray Navy 1992, waxay ahayd waqti ku habboon. Waxaan u shaqo tagay Virginian-Pilot Norfolk, Virginia - shirkad si buuxda u qaadatay IT Innovation oo qayb ka ah istiraatiijiyaddeeda asaasiga ah. Waxaan rakibnay faybar oo waxaan ka saarnay dayax-gacmeedka qadka, waxaan xakameyneynaa kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada kumbuyuutareed ee barnaamijka adag lagu duubo iyo xog aan qabannay oo naga caawisay inaan hagaajinno dayactirkeenna iyada oo loo marayo Intranet, iyo shirkadda waalidka, Landmark Communications, ayaa durbaba si weyn u maalgashatay helitaanka wargeysyada khadka tooska ah. Waan ogaa in Shabakaddu ay aniga tahay wax nolosha igaga beddelaya.
Oo kaliya laba sano ka hor, Sir Tim Berners-Lee dhisay dhamaan qalabkii lagama maarmaanka u ahaa Webka shaqeeya, oo ay ka mid yihiin Hab maamuuska wareejinta HyperText (HTTP), Luqadda Calaamadaha HyperText (HTML), biraawsarkii ugu horreeyay ee shabakadda, kii ugu horreeyay HTTP software-ka, server-kii ugu horreeyay, iyo bogagga hore ee shabakadda taasi ayaa sharaxday mashruuca laftiisa. Ganacsigayga iyo shaqadayda macno ahaan dhammaantood waxay ku mahadnaqeen hal-abuurnimadiisa, mar walbana waxaan doonayay inaan arko isagoo si shakhsi ah u hadlaya.
25 Sano Kadib iyo Isbadalka IT
Calaamadee Schaefer igu casuumay inaan ku biiro Iftiimiyeyaasha - Kala Hadlida Maskaxda Ugu Fiican Tech, waa Podcast-ka 'Dell Podcast' kaas oo aragti weyn ka bixiya hogaamiyaasha ka dambeeya shirkadaha ugu casrisan adduunka. Intii aan ku ogaa Dell inay tahay shirkad iibisa desktops-yada iyo laptop-yada macaamiisha iyo server-yada meheradaha - weligay aragti kamaan helin guud ahaan nidaamka deegaanka ee Teknolojiyada Dell illaa fursaddan. Waxay ahayd safar xiiso leh - labadaba la shaqeynta Mark oo aan ixtiraam weyn u hayo - iyo helitaanka aragti mustaqbalka markaan wareysanayo hoggaanka Dell.
Inbadan oo intaas kadib ah!
Iyada oo qayb ka ah barnaamijka, ayaa naloogu yeedhay in aan ka soo qayb galno Dunida Dell EMC gudaha Las Vegas (halkaan aan ku qorayo miiska qolka hudheelkayga). Waxaan ogaanay, waxyar kadib, in Berners-Lee uu kahadli doono Sirdoonka Artificial. "Giddy" waa ereyga kaliya ee ku habboon ee loo isticmaalo in lagu muujiyo farxadayda. Waxaan u maleynayaa Mark xitaa wuxuu ii sheegay inaan is dejiyo hal dhibic. Hubso inaad iska hubiso Calaamadee fikradaha khudbaddan sidoo kale!
Sir Tim Berners-Lee oo ku saabsan Sirdoonka Artifishalka
Khadkii hadalka ayaa lagu soo koobay kala badh hareeraha Sands Expo waana ku mahadsanaa Mark oo haysta meel saf ah maadaama aan si dhakhso leh ugu soo raray qalabkii duubitaankeena ugu dambeeyay. Waan fadhiisanay, oo Mark ayaa sawirkeyga korka ka qabtay above woohoo! Daqiiqado yar kadib Sir Tim ayaa yimid masraxa wuxuuna bilaabay dooda. Wuxuu la wadaagay jacaylkiisii ​​hore ee Isaac Asimov iyo Arther C. Clarke, oo ah laba qoraa oo aabbahay dhintay uu igu baray markii aan yaraa (oo ay weheliyaan Star Trek, dabcan!). Markay ahayd 16 sano iga da 'weyn, wali waxay ahayd mid xiiso leh inaan ka fekero isbarbar dhigga nolosheena - in kastoo aan ogahay inaan waligay la ii yeeli doonin. Haa, sida haddii taasi ay ahayd kala duwanaanshaha kaliya.
Berners-Lee qof walba ha ogaado in uusan khabiir ku ahayn AI, laakiin wuxuu lahaa xoogaa fikir ah ilaa iyo inta laga helayo faa'iidooyinka iyo cabsida jirta. Isbeddelada ka imaan doona AI waa kuwo aan la qiyaasi karin xilligan, laakiin cidina kuma doodayso suurtagalnimada ama faa'iidooyinka aan dhammaadka lahayn ee aadanaha.
As DellEMC waxay horumarinaysaa tikniyoolajiyadeeda, tusaale ahaan, isku-dhafid la'aanta AI waxay horayba ugu jirtaa jihada - nidaamyada kobcaya xisaabinta, kaydinta, iyo isku xirnaanta caqli ahaan sidii shirkaduhu ugu baahan yihiin. Hoosudhaca isdhexgalka ballaaran, nidaamyada kaladuwan, iyo qaladka aadanaha ayaa kaa caawin doona shirkado badan oo badan inay gaaraan xawaare bilow, erey dhowr jeer laga maqley dhacdada.
Berners-Lee waxay ka wada hadashay horumarka bulshada ee la gaari karo kaas oo gacan ka geysan doona yareynta qashinka, kordhinta waxtarka, iyo guud ahaan hagaajinta bulshada ee aadanaha.
Kaliya ka fikir tan tan aragtida shirkadaha, oo leh nidaamyo maaliyadeed oo saadaalin kara, kugula talin kara, ama xitaa la jaan qaadi kara iyada oo ku saleysan caafimaadkaaga maaliyadeed. Ama nidaamyada kheyraadka aadanaha ee soo saara nidaamyo dhiirigelin shaqsiyadeed oo ku aaddan dhiirrigelinta shaqaalaha. Ama nidaamyada beeraha ee hagaajiya isticmaalka sunta cayayaanka ama biyaha si firfircoon ayadoon loo baahneyn in la ogeysiiyo beeraleyda. Ama shirkadaha tiknoolajiyada ee kor u qaadi kara isla markaana hagaajin kara kaabayaasha iyo xitaa khibradaha isticmaalaha iyada oo aan loo baahnayn in la horumariyo qorshooyinka wax soo saarka, kooxaha xallinta, ama imtixaanka.
Ama, dabcan, suuqgeynta sirdoonka macmalka ah ee shakhsiyan u qoondeeya luqadda, bixinta, dhexdhexaadiyeyaasha, iyo kanaallada si loo shakhsiyeeyo oo loo soo jiito rajada! Cajiib!
Ka waran Skynet iyo Kalinimada?
The singularity waa mala-awaal ah in ikhtiraacidda sir-doonka macmalka ah uu si kadis ah u kicin doono koritaanka teknoolojiyadda, taasoo ka dhalan doonta isbeddello aan la qiyaasi karin oo ku saabsan ilbaxnimada aadanaha.
Si kale haddii loo dhigo, maxaa dhacaya marka nidaamyadu ay horumariyaan nidaamyo ka baxsan awooddeenna aan ku fahmi karno? Khayaaliga sayniska ayaa tan badanaa ku sharaxay sida Terminator, halkaas oo tiknoolajiyada ay ku go'aamiso aadanaha aan loo baahnayn oo na baabi'iya. Aragtida Berners-Lee maahan mid rabshado wata laakiin wali walaac weyn ayey muujineysaa. Mid ka mid ah arrimaha uu ka hadlay ayaa ah in robotyadu aysan lahayn oo aysan yeelan doonin xuquuqda. Hoggaamiyeyaasha ganacsiga iyo dowladdu waxay ku qasbanaan doonaan inay dejiyaan kontaroolo aad u adag oo ka baxsan Saddexda Sharciga ee Isaaq Asimov.
Aynu dhinac iska dhigno hubka casriga ah ee robotka ah ee durba jabiya qaanuunka # 1. Dhibaatada, sida uu sharraxay Berners-Lee ayaa ah in aalado ayan ahayn arrimaha dhabta ah - sirdoonka macmal yahay. Shirkadaha waa teknolojiyada dhammaantoodna waxay fulinayaan AI si ay uga caawiyaan dhinac kasta oo ganacsigooda ah. Mark wuxuu badiyaa wadaagaa Domino Pizza tusaale ahaan. Iyagu ma shirkad pizza ah oo teknolojiyad leh baa? Mise waa a shirkadda teknolojiyadda oo loo dhisay inay keento pizza? Aad bay u dambeysaa maanta.
Iyo dhibaatada? Shirkadaha do xuquuq leedahay; sidaas darteed, tiknoolajiyadooda waxay leeyihiin xuquuqda soo jireenka ah. Wakiil ahaanna, sirdoonka macmalka ah ee ay soo saartay shirkaddaas waxay yeelan doonaan xuquuq. Taasi waa arrin caqli-gal ah oo u baahan in laga wada hadlo maaddaama caqliga macmalka ah uu dardargelinayo caannimada iyo adeegsiga. Qiyaas shirkad weyn, tusaale ahaan, oo leh barxad ka faa'iideysata sirdoonka macmalka ah si loogu abuuro wax faa'iido u leh saamileyda - laakiin taasi waa wax aad u xun aadanaha. Maaha aalado aan u baahannahay inaan ka walwalsano, waa caqli macmal ah oo aan lahayn kontaroolo lagu hubiyo nabadgelyadeena iyo nabadgelyadeena.
Berners-Lee wuxuu qabaa in kelinimada ay run ku noqon karto 50 sano gudahood. Wuxuu sidoo kale si aan leexleexad lahayn u sheegay inay tiisa tahay macquul ah fikradda ah in AI ay dhaafi doonto caqliga aadanaha. Waxaan ku nool nahay waqtiyo layaableh! Ma aaminsani in Berners-Lee uu ka argagaxay ama uusan ka baqayn mustaqbalkan - wuxuu kaliya sheegay in shirkadaha, dawladaha, iyo xitaa sheekooyinka sheekooyinka khiyaaliga ah ee sayniska ay u baahan yihiin inay ka wada hadlaan arrimahan si ka sii badan haddii aan rajeyneyno inaan hubinno in mustaqbalkeennu yahay mid nabdoon.
Shaacinta: Dell waxay bixisay dhammaan kharashyadayda si aan uga qayb galo Dell EMC World waana macmiilkayga Nalalka Podcast. Hubso inaad nala jaan qaado oo aad dib noo eegto, runti waxaan rabnaa ra'yigaaga!
Tags: aiberners-marnayisku duwiddaDelldell emcdunida dell emcisku-dhafnaanlas vegasiftiinCalaamadee Schaefertim berners-lee
Xuquuqda Daruuraha: Soosaarida Xuquuqda Mawduucyada Toos ah Waqtiga-waqtiga ah